Ra’isalwasaraha Soomaaliya oo la kulmay madaxa guud ee hay'adda WFP (Sawiro) – SBC
Ra’isalwasaraha Soomaaliya oo la kulmay madaxa guud ee hay'adda WFP (Sawiro)
Warsaxaafadeed ka soo baxa qaybta warfaafinta ee xafiiska Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey kulan maanta Muqdisho ku dhexmarey Ra’isalwasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas & Madaxa guud ee hay’ada WFP Josette Sheeran.
Muqdisho, Khamiis, 21 July 2011 – Josette Sheeran oo ah Madaxa Guud ee Hay’ada Cuntada Adduunka (WFP) ayaa maanta ku soo booqatay Ra’iisul Wasaaraha Xafiiskiisa Muqdisho. Waa markii ugu horreysey oo ay Madaxa Guud ee Hay’ada Cuntada Adduunka soo gaarto magaalada Muqdisho, wallow ay bishii April soo gaartay magaalada Gaalkacyo. Josette waxaa wehliyey Agaasimaha Geeska Afrika ee WFP iyo saraakiil sar-sare. Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehliyey kulankan wasiiradii guddiga abaaraha iyo Guddoomiyaha Gobolka Banadir.
Josette Sheeran, Madaxa Guud ee Hay’adda WFP ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsantahay inay la kulanto Ra’iisul Wasaaraha, sheegtayna in WFP ay ka go’antahay sidii gurmad deg-deg ah loola soo gaari lahaa shacabka soomaaliyeed. Josette ayaa sheegtay in WFP ay hadda diyaarisay nafaqooyin wax weyn ka tari kara xaaladda oo dadka gaajeysan ay ku soo celineyso nafaqadii, waxeyn ballanqaaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan nafaqadan u gaarsiin doonaan dhammaan goboladda dalka gaar ahaan kuwa ay sida ba’an abaarahu uga jiraan. WFP waxey si joogta ah cunno iyo nafaqo u gaarsin doonaan barakacayaasha ku sugan Muqdisho. WFP oo ka jawaabeysa codsiga Ra’iisul Wasaaraha waxey ballanqaadeen in isbedel cusub ay la iman doonaan taasoo laga dareemi doono xoojinta iyo kobcinta gar-gaarka bani’aadanimo.